बांगेमुढामा दुखेको दाँत निको पार्ने देवता ! त्यहाँ कुनै मूर्तिको आकृति छैन तर… – Rastriyapatrika
बांगेमुढामा दुखेको दाँत निको पार्ने देवता ! त्यहाँ कुनै मूर्तिको आकृति छैन तर…
काठमाडौँ — चौध–पन्ध्र वर्षको छँदा भीष्म श्रेष्ठलाई दाँतले पीडा दियो । राजभण्डारीहरूले सयौँ वर्षदेखि दन्त उपचार दिइएको थलो नघ:लकै बासिन्दा भए पनि श्रेष्ठ पैसा र किला बोकेर थ्यामरु टोल (अहिलेको बांगेमुढा) पुगे । त्यहाँको ठूलो बाङ्गो मुढाको मुखमा पैसा र किला ठोके ।
त्यहाँबाट घर फर्कंदै गर्दा राजभण्डारीको दन्त पसल छिरे । पैसा र किलाको कमाल थियो या दन्त चिकित्सकको, उनलाई थाहा छैन, तर उनको दाँत फेरि कहिल्यै दुखेन ।
दुई दिनअघि त्यही बाङ्गेमुढामा भेटिएका ६६ वर्षे श्रेष्ठले सुनाए, ‘त्यसरी किला र पैसा ठोकिने मुढालाई नेपाल भाषामा वा स्या: द्यो अर्थात् दाँत दुखेको निको पार्ने देवता भनिन्छ । दाँत दुखे हामी यहाँ किला र पैसा ठोकिसकेपछि मात्रै दन्त पसल छिरेर उपचार गराउँथ्यौँ । यहाँको मुढा बाङ्गो भएकोले यो ठाउँको नामै बाङ्गेमुढा रहन गएको हो ।’
उनका अनुसार, खासमा यो टोलको नाम थ्यामरु टोल हो, तर बाङ्गो मुढा तेस्र्याएर राखिएकोले यो चोकको नामै परिवर्तन भएर बाङ्गेमुढा रहन गएको हो ।
थ्यामरु टोलको वा स्या: द्योमा किला र पैसा ठोक्दा दाँत दुखेको निको हुने भन्ने मान्यता अहिले पनि छ । यहाँ भक्तपुर र ललितपुरबाट पनि दाँत दुखेको निको पार्न किला ठोक्न आउने गरेको स्थानीय लालबहादुर श्रेष्ठले बताए । पहिले बीचमा प्वाल भएको कम्पनी पैसा पनि ठोकिने गरिएका थिए यहाँ । ती पैसाहरू हराएर गएपछि सिल्भर पैसाहरू आउन थालेको र यी पैसाहरू ठोक्ने चलन सुरु भएको उनको दाबी छ ।
दाँत हल्लिएको, दुखेको निको पार्ने देवताको रूपमा मुढालाई पुजिने गरेको उनले बताए । ‘त्यहाँ कुनै मूर्तिको आकृति त छैन, तैपनि मानिसले दुलो जस्तो प्वालमा पूजा गरेर पैसा र किला ठोक्ने चलन छ,’ उनले भने, ‘किला ठोक्ने भएकाले यो टोललाई नै किलाघ: टोल भनेको भनेर भ्रम पनि फैलिने गरेको छ । तर यसलाई वा स्या: द्यो नै भन्छ ।
र यो टोललाई थ्यामरु टोल भनिन्छ ।’
नेपाल भाषाका पत्रकार सुरेश किरणका अनुसार, काष्ठमण्डप बनाइसकेपछि बचेको ठूलो मुढा यहाँ ल्याएर राखिएको मान्यता छ । तर यकिन अभिलेख भने पाउन सकिएको छैन । ‘कहिलेदेखि यसमा दाँत दुखेको निको पार्ने भन्दै किला ठोक्न थालियो भन्ने किन प्रमाण फेला परेको छैन,’ उनले भने, ‘पहिले यो रुखको मुढा असन हुँदै भोटाहिटीसम्म लामो थियो भनिन्थ्यो । वरपर नयाँ घर बनाउँदा मुढाका टुक्राहरू भेटिए भन्ने पनि सुन्थ्यौँ हामी पहिले ।’
काष्ठमण्डप बनाएर बचेखुचेको काठबाटै थ्यामरुमा काष्ठमण्डप शैलीकै थ्यामरु सत: बनाएको मानिन्छ । यो मुढामा कुनै पनि समुदायले विशेष रूपमा पूजा गर्ने परम्परा वा चलन केही पनि छैन । सुरेशका अनुसार, काठमाडौंकै चिकंमुग: टोलमा सानो मुढा छ, त्यहाँ पनि किला ठोक्ने गरिन्छ । तर त्यसमा किला ठोकेमा दाँत दुखेको निको हुने भन्ने मान्यता छैन ।
थ्यामरु टोलमै रंग पसल भएका ६७ वर्षे रत्नमान श्रेष्ठले अहिलेसम्म यहाँ किला ठोकेका छैनन् । दाँत दुख्ने समस्या नभएकोले किला नै ठोक्न नपरेको उनी बताउँछन् । तर बर्सेनि यहाँ किला ठोक्न आउनेहरू भने उनीकहाँ कसरी किला ठोक्नुपर्छ भन्दै सोध्न पुग्छन् । उनी पनि किला ठोक्ने विधि बताइरहेका हुन्छन् ।
‘पहिले कि:सली (माटोको पाला) मा टन्न चामल राखेर त्यसमाथि पैसा र पैसामाथि सुपारी राखेर चढाउने गरिन्छ । त्यसपछि पैसा र किला ठोक्ने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘आफूले नगरे पनि पहिलेदेखि नै गर्दै आएकोले यस्तो गर्ने भन्ने मात्रै थाहा छ, त्यही भनिदिन्छु ।’